Sharciyada Murphy ee sawir qaadayaasha — Photo-Sales.com
Light marna waa ku filan, marka haday aad u badan marka laga reebo.
Oo qorraxdii waxay ku ifiyo dhinaca qaldan.
Waxaad mar walba dooneysaa inaad guurto yar hooska
Light saxda aanay dhicin, marka laga reebo kiiska. dhamaaday markii drive flash ah, batariga.
Marka taxane ah oo flash toogasho ku flash qaab dhismeedka xaq ma muujiyo.
Haddii muhiimsanaa flash ah, ma ahan sidii la rabay.
Haddii aad ka Qorraxdu nuurka – waxaa jira daruur.
Haddii aad dhigay WB ah – midabka oo is bedel ah iftiiminta.
Haddii aad toogtaan adduunka adag (si fiican, tusaale ahaan – badallo ka furmo suuqa + + dhaadheer nalalka kuna laambadahoodii yaryaraa) – in uu yahay kan ugu fiican sudhaan sidiisa ahan wax macquul ah si ay u helaan iftiinka.
Haddii aadan haysan diffuser ah flash – ka dhismo iyo darbiyada waxaa mar kasta midabka.
Haddii aad tahay oo dhanba ee flash – ka baxay wuxuu iska dareerayay batariyo (at ama gurigaaga ama sii daayay set firaaqada).
siku had iyo jeer waa midab qaldan.
Waxaa u caddaatay kaliya ka dib markii biqil sawirka raadinaya sawiro.
Kaarka Flash iyo dhamaadka batari saxda ah mid jir hor masterpiece ah!
The Muuqaallo ugu fiican ee hore aad ah – marka camera guriga joogay.
ISO la hubiyey ka dib taxane ah oo Wehbe (dabcan dhigay 1600+).
Gan goobta wadada raaxo, waxa uu jiidayaa usha ka soo baxay oo jeebka.
Autofocus had iyo jeer kala jejebiyey! (True, SLR this aad uga wanaagsan)
Auto dheelitirka cad waxaa had iyo jeer u jiifa shaqaalaha ugu qiimaha badan.
Maala A lama go’an hal lug iyo geedi socodka habeenka toogtay laba ka mid ah soo-gaadhista daqiiqo uu go’aansado inuu ka seexan.
Ka dib markii sawir u muuqday ka dib markii duur biciid ah, Fur daboolka siku.
In set badal u flash ah waqtiga saxda ah ee uu lumo batari
In Dufcaddii sida sawirka processing keeni xoog Sharpe iyo jiilaalka muuqaalkii la laamaha qodxo – Blue Rush.
Ka heshay camera la dayactirka siku, waxaa loo hubiyo gelis kala duwan, oo ka dib markii nus saac ee ku dhow adeega dayactir, waxaa soo baxday in la gashto camera ah, shubo kaamiro ula dhintay.
Ka dib markii loo dhaariyay ee uu madaxda u adeega, kuwaas oo berri walba diyaar noqon doono – qabtay muddo laba bilood ah, iyo adeega laba jeer ka bedesho cinwaankaaga
Biririf Camera in isla fiidkii, sida bixiyey dayactirka la ogaanshaha isku mid ah.
Wixii dayactir damaanad ee adeega (oo kaliya toddobaadkii diraya hal dhinac) waxaa soo baxday in ka dib markii ay hal, wax kale gebi ahaanba la kharribay.
In nidaamka of print casri ah ee musqusha waqtiga diraya warqad ee horumariyaha, qof daarayaa iftiinka aawadiis labaad ah.
Wargeyska ayaa sawir ugu qaalisan waxaa dhan ciinwaanka.
Haddii ay jiraan 4 Maala madax saari karo, amiirradii oo dhan ma la isku badali karo.
The filter ugu qaalisan looma isticmaalo in at dhan.
Haddii aad weydiiso qof kale inuu qaado sawir ah sawir qaade oo la siiyo gacmaha camera soo galeen, sawir lagu sawiray iyada oo madaxa ah.
Haddii camera aad ku lifaaqan gashto Telefoto, markaas wax xiiso noqon doonaa mid aad u dhow. Sidoo kale, markii ballaaran-xagal lenses sawiro – wax aad u xiiso badan meel tageyso.
Haddii aadan haysan a gashto ama Dhaqale siddo Dhaqale – ubax raaxo ka dibna sida, cayayaan qabtay
Maala, maqashiiyo, ma waxtar leh … Tripod halmaamo guriga, waxaad u baahan tahay waqti kasta.
Istaag mishiinka kaas oo ka dilaacay ee siku ugu qaalisan dhaco!
Marka rasaas kala duwan dhawayn ah ma aha had iyo jeer ku filan
Printer iyo Been, kormeeruhu midabka. Had iyo jeer. Laakiin mar kasta oo hab cusub. Sidaas darteed, qorid had iyo jeer ma aha waxa aad rabto.
Rinjiga in printer waa ay dhici karaan hadda marka ay lagama maarmaan tahay in si deg deg ah sawir ee qofka aad ayay u yar ku qor.
Sawir gaar ah la daabacay biyuhu, khad, qof dejinaaya ama ay leefaan.
Cat A cuslaynaysaa (off) computer xilligan ugu inopportune.
Tirada megapixels in camera yahay had iyo jeer ka weyn yahay gashto ogol yahay.
Oo aad u badan si ay u maareeyaan, kala iibsiga iyo buuq. Markaasay aad u yar muuqaalka far iyo dalagga.
Bedelaadda camera ama la gashto camera galay 2 fasallo kor ku xusan, waxaad og tihiin in, xallinta dhibaatooyinka cusub jir, abuurista badan oo cusub, kaas oo xitaa aan looga shakisan yahay.
Haddii batariga ee camera ah kuma filna biqil sawirka, iibsan firaaqada ah – halkan ka bedeli marnaba ku yimaado anfacaya. Oo haddii aad weli u baahan tahay, waxaa la sii daayay.
3. Sawir ka qaad.
Wixii sawir group waxaa had iyo jeer waa qof halaaqoodaa iyo indhihiisa la xiray.
Haddii aanay jirin halaaqoodaa, ka dibna qof hindhiso.
Si ilmaha loo nadiifiyaa waqtiga toogashada wax lahu, tusaale ahaan shukulaatada.
Haddii aad go’aansato in lagu soo qabto wajiga oo si qurux badan soo jiidasho lahu by shukulaatada, ka dibna ay markii ugu aad riixdid batoonka, kaadida tirtir soo jiidasho wajiga qaybta ugu caansan ee dharka ama xaaladda.
Bird (ama xayawaan) mar walba diyaar u yahay inuu la fariisto ka hor isku dayay in uu ka saar furka siku. Inta badan daacad u ah sugaan illaa camera diyaar u yahay in ay toogtaan oo markiiba baaba’aan.
Inta lagu guda jiro biqil sawirka, model isku dhafan waa diyaar, qalabka u diyaar-garowga sawir diyaar iyo dhismaha – waa ku dhawaad ​​mucjiso.
Ugu model sawiro ku yimaado dharka, ma la noolaadaan deegaanka (ikhtiyaar – la isku qurxiyo la yaab leh iftiin iftiimay ka flash-ka).
Marka model ah oo dibadda ku toogtay, tirada kaneecada ka badan dhan xad macquul ah.
Darbo Best at sawir biqil – horreeyay ee ugu danbeeyay, qaaday ganay, halkii ay si taxadar leh loo dhisay jir.
Haddii aad qaadato ilaalinta roobka, waxa ay noqon doonaa mid engegan. Haddii dalladda (cover) guriga, ka dibna roobka.
Marka u socda dad badan oo ku saabsan sawirka biqil ka wadajir ah, balse aan dadka la yimaadaan oo qaban ma in waqtiga loogu talagalay.
Waqti Plan for sawiro ah ma noqon karo!
Qof isku dayo inuu fadhiistaan ​​jirridda.
Halkaa marka ay marayso in kiishka ku jira qaybaha ugu jilicsan.
naqshadaha sawiro background wallpaper HD soo jeeda wallpaper qurux badan tahay beauty tahay buluug sawiro dhismaha wallpaper HD midabka sawir Crimean sawiro dhaqanka rinjiyeynta maalintii wallpaper HD deegaanka sawiro yurub images HD caanka ah images kaynta wallpapers beerta images HD cagaaran sawir kur wallpapers taariikhda clipart guri rinjiyeynta muuqaalka wallpaper HD caleen rinjiyeynta buurta dabiiciga ah wallpaper dabeecadda wallpaper jir wallpapers dibadda sawiro bannaan sawir park sawir warshad sawiro dhirta HD dhagaxayga weyn wallpaper HD goobta rinjiyeynta badda images xilli wallpaper samada rinjiyeynta dhagax HD xagaaga sawir dalxiiska images munaaraddii sawir nabdaysan images safarka images geed sawir view HD biyaha HD
© Copyright 18th of September 2021 21:47:08 All rights reserved Photo-Sales.com.